Wafdigii ka socday dowladda Somaliya iyo Maamulada Jubbaland iyo KG oo dib u laabtay – Radio Daljir
Wafdigii ka socday dowladda Somaliya iyo Maamulada Jubbaland iyo KG oo dib u laabtay
Maajo 2, 2015 5:24 b 0
Sabti, May 02, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntalnd Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta OO Taariikhdu tahay 02, May, 2015 Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland ku sii sagootiyey Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Madaxmweynaha Maamulka Koonfur-Galbeed Shariif Xassan Sheekh Aadam , Madaxweynaha Jubba-land Axmed Maxamed Islaan iyo weftiyadii ay kala hoggaaminayeen.
Sagootinta Madaxda iyo wefdiyada la socday waxaa sidookale ka qeyb-qaatay Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey , Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland Siciid Xasan Shire , wasiiro , xildhibaano katirsan Xukuumada Puntland ,Saraakil ciidan , iyo dadweyne kale oo aad u tira badan.
Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa kahor intaanu kadhoofin garoonka diyaaradaha ee caasimadda Puntland ayaa waxaa uu halkaasi salaam sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta dawladda Puntland iyo Kooxda Baanbeyda, iyadoo ay halkaasi ugu diyaarsanaayeen diyaaradihii ay ukala raaci lahaayeen magaalooyinka Muqdisho , iyo Baydhabo.
Sidookalena Madaxweynaha Maamulka Jubba Axamed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa saacad kadib kaduulay garoonka diyaaradaha caasimadda Puntland ee Garoowe una anbabaxay magaalada Kismaayo ee Caasimadda ku meel-gaadhka ah ee Maamulka Jubba-land.
Madaxweynaha Dawladda Federaalka iyo Madaxweynayaasha Dawladaha Xubnaha ka ah oo maalmihii ugu dambeeyey kusugnaa caasimadda puntland ee Garoowe halkaas oo uu ka socdey shirkii madasha wadatashiga Dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah uuna maanta kasoo baxay war-murtiyeed lagu kala saxiixday qodobbo waxtar weyn u ah masiirka ummadda soomaaliyee
Madaxweyne Gaas oo Maanta u Dhoofay Talyaaniga
Madaxweyne Gaas oo si Qoto dheer uga Hadlay Heshiiska la Gaaray[DHAGAYSO]